Izotope RX: Maitiro Ekubvisa Neruzha Ruzha kubva kuIzwi Rako Rekodhi | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 12, 2017 Chipiri, Gunyana 12, 2017 Douglas Karr
Iko hakuna chimwe chinowedzera kushungurudza kupfuura kudzoka kumba kubva kuchiitiko, kuisa yako mahedhifoni mahedhifoni, uye kufunga kuti paive netani yeruzha rwekumashure mune ako marekodhi. Ndizvo chaizvo zvakaitika kwandiri. Ndakaita akateedzana epodcast yekurekodha pachiitiko uye ndakasarudza ma lavalier maikorofoni uye Zoom H6 rekodhi.
Isu takanga tisina nzvimbo yakatsaurirwa studio yekurekodha, isu takangogara patafura kure kure nemapoka… asi hazvina kubatsira zvachose. Dai ndaive nemusanganisi wangu uye mamwe maikorofoni e studio, ndingadai ndakagadzirisa zvakawanda zvemashure asi aya ma lavalier mics ainhonga ruzha rudiki rwese! Ndakapwanyika.
Nekudaro, isu takaita kumwe kuyedza neAudacity maturusi ekubvisa kumashure manzwi asi kana tikabvarura masetingi, izwi rakatanga kurira wonky. Ini ndakatumira iyo nyaya pane yangu inodiwa podcast foramu uye yangu inoshamisa shamwari, Jen Edds pakarepo yakakurudzirwa Izotope RX6, chimbo chekumira-chega chekugadzirisa mafaera odhiyo.
Pasina chero kudzidziswa kana kana kutarisa vhidhiyo yeYouTube, ini ndakaburitsa rwiyo rwangu rwakaipa rwekushandisa, ndokubaya Inzwi De-ruzha, uye kuda kunyorova bhurugwa rangu apo ini ndaiteerera ruzha rwemashure rinongonyangarika!
Kana iwe uchifunga kuti ndiri kugadzira izvi… ndakaenderera mberi ndikagovana chidimbu chemhedzisiro. Zvinoshamisa zvachose! Rutivi runyorwa - Ini handina kurondedzera izvi mu studio yangu, ini ndangoshandisa desktop mic paGarageband ... saka usanditonge.
Izotope RX6 Voice De-ruzha parizvino iri kutengeswa ne $ 99 kubva $ 129. Izvi zvinofanirwa kune chero podcaster inozviwana ichinetsekana neruzha rwekumashure mukurekodha kwavo - kubva pamabhatani, hums, kutema, uye zvimwe. Ini ndangoshandisa iyo adaptive mode uye presets, asi iwe unogona chaizvo kushanda pane yako odhiyo faira sekunge yaive muFotohop ine huwandu hwakavakirwa mumaturusi.
Tenga Izotope RX6 Voice De-ruzha
Tags: ruzha rwemashurede-ruzhaisotopeizotope rxzviroto rx6bvisa ruzha rwemashurebvisa ruzha